नेकपाको ‘ह्याङ ओभर’ मा रन्थनिएको कर्णाली र ख्याउटिएको बिकास – HostKhabar ::
by भानुभक्त अधिकारी
चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलव ६ हुने लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट पनि ल्याएको छ । बजेट ल्याउनु र आर्थिक लक्ष्य प्रक्षेपण गर्नु कुनैपनि सरकारका नियमित कार्य हुन् जो बर्षैै पिच्छे चलिरहन्छन् । त्यो बजेट पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भयो की कागजमैं सिमित भयो त्यो मात्रै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
२०७४ साल फागुन महिनाको पहिलो साता मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेृतत्वमा ६ सदस्सीय मन्त्रीहरु सहित कर्णाली सरकार गठन भएको थियो । अव कर्णाली सरकारसंग जनताका लागि काम गर्ने समय सीमा करिब २ बर्ष बाँकी छ । मुख्य मन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भए यता मंशीर पहिलो साता (सम्भवत तिहार लगत्तै) कर्णालीले ३ जना मन्त्रीहरु बिदाई गरी उनीहरुको ठाँउमा ३ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो अवधिमा मुख्यमन्त्री र कर्णाली सरकारले कर्णालीको लागि के गरे? अव त्यसको हिसाव किताव गर्न ढिला गर्नु हुदैन । के परिवर्तन पाए जनताले कर्णालीमा?
यो अवधिमा मुख्यमन्त्री र कर्णाली सरकारले कर्णालीको लागि के गरे? अव त्यसको हिसाव किताव गर्न ढिला गर्नु हुदैन । के परिवर्तन पाए जनताले कर्णालीमा? प्रत्यक बर्ष बिनियोजन हुने अरबौंको बजेट काँहा खर्च भइरहेको छ? यी प्रश्नहरुको जवाफ कर्णाली सरकार संगै छैन । अघिल्लो बर्ष त कर्णाली सरकारले प्रदेशभर जम्मा जम्मी २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेछ । निकै गर्वका साथ मुख्यमन्त्री शाहीले यो कुरा प्रगती विवरणमा समावेश गरेर सार्वजनिक गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको २०७५ फागुन ३ देखि ०७६ फागुन २ गतेसम्मको वार्षिक प्रगति विवरणमा उक्त अवधिमा २ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरिएको उल्लेख छ। अव सर्वसाधारण जनताले यो सरकारबाट र अव आउने यस्तै सोच भएकाहरुबाट के अपेक्षा गर्ने? यसको जिम्मा मुख्यमन्त्रीले लिने की नलिने?
केन्द्रकै हस्तक्षेपमा प्रदेश सरकार र नेकपाको ‘ह्याङ्ग ओभर’ को शिकार कर्णाली
केन्द्रमा नेकपाभित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसङै आवश्यक परे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि हेरफेर गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको थियो–नेकपा सचिवालयभित्र । तर मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव अर्का अध्यक्षले नमानेको झोँक ओली पक्षले कर्णालीमा पोख्यो । पूर्व माओवादी र माधव नेपाल पक्षका समेत असन्तुष्ट १८ जना सांसदको साथ लिएर ओली पक्षीय नेता यामलाल कँडेलले असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बिरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए ।
सत्तारुढ नेकपाकै असन्तुष्ट १८ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपाको केन्द्रमा समेत भुईँचालो गयो । विवाद मिलाउन अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालबिच बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन र दुवै अध्यक्षले बेग्लाबेग्लै निर्देशन दिए–कर्णालीलाई ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेखेर मुख्य सचेतक गुलाबजल शाहमाथिको कारबाही फिर्ता लिएर उनको पद यावत राख्न निर्देशन दिए । अर्का अध्यक्ष दाहालले भने शाहीकै कदमलाई बल पुग्ने गरी प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन भन्दै प्रदेश इन्चार्जलाई पत्र लेखे । कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका सांसद केन्द्रको दबाबमा पछि हटेसङै शाहीको पद जोगियो र प्रदेश सरकारले बहुमतको बलमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।
कर्णाली अहिले सम्म रन्थनिएको मात्रै छैन अर्को कोणबाट हेर्दा कर्णालीलाई इपिसेन्टर मानेर नेकपाभित्र भुँइचालो गएको छ । कर्णालीका ओली पक्षिय नेता कंडेलले गरेको कार्यले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको समाचारहरु आउन थालेका छन् ।
यो परिवेशमा कर्णाली अहिले सम्म रन्थनिएको मात्रै छैन अर्को कोणबाट हेर्दा कर्णालीलाई इपिसेन्टर मानेर नेकपाभित्र भुँइचालो गएको छ । कर्णालीका ओली पक्षिय नेता कंडेलले गरेको कार्यले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको समाचारहरु आउन थालेका छन् । नेकपाको २ तिहाईबाट बनेको सरकार र नेपालको यो बेहाल अहिले सम्म देशले भोगेको थिएन । अव पनि कर्णाली सरकारले बचेको २ बर्षमा माखो मार्दैन भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेकपाको रडाको को क्षतीपुर्ति कर्णालीका जनताले किन भर्नुपर्ने? यो प्रश्न अहिले उब्जिएको छ ।
के कर्णालीमा सक्षम नेतृत्वको खडेरी परेकै हो त?
काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ र यस अर्थमा सत्तामैं हुनेको चर्चा हुन्छ र राम्रो नराम्रोको जिम्मा उसैले लिनु पर्दछ । यस अघि कर्णालीबाट प्रतिनीधित्व गरेका कुनैपनि नेताले कर्णाली या आप्mनो गृह जिल्लामा प्रशंसा नै गर्ने खालको विकास गरेनन् ।
राजनीतिक भन्दा अरु सोचको हैंसियत र भिजन नभएकाहरुबाट केही हुन सक्दैन भन्ने युवाहरुको आक्रोश यर्थातमा परिणत मात्रै भएको छैन, प्रमाणित नै भएको छ । अहिले सत्तामा भएका र कर्णालीका मुख्य मन्त्री शाहीसंग त्यस्तो कुनै क्षमता र भिजन नरहेको प्रमाणित नै भइसक्यो । मुख्यमन्त्रीको पद जोगिनुलाई कर्णालीका जनताको अपेक्षा संग जोडेर हेर्न सकिदैन ।
राजनीतिक भन्दा अरु सोचको हैंसियत र भिजन नभएकाहरुबाट केही हुन सक्दैन भन्ने युवाहरुको आक्रोश यर्थातमा परिणत मात्रै भएको छैन, प्रमाणित नै भएको छ । मुख्यमन्त्रीको पद जोगिनुलाई कर्णालीका जनताको अपेक्षा संग जोडेर हेर्न सकिदैन ।
अविश्वासको प्रस्ताव लिएर विवादित भएका अर्का नेता कंडेलको क्षमता त यस अघि पनि जनताले हेरिसकेका थिए । उनले वीरेन्द्रनगरको मेयर हुदा, पुर्व सांसद हुदा र मन्त्री हुँदा समेत सुर्खेतका लागि वाह वाही कमाउने एउटा पनि काम गर्न सकेनन् । राजनीतिको फेर समाएर ओली या अर्को कुनै गुटको राजनीति गर्नेका लागि मात्रै उनी एउटा नेता वा पात्र हुन्, आम जनताका लागि त उनी असक्षम राजनीतिक व्यक्तित्व हुन ।
राजधानी वीरेन्द्रनगर भित्रैको विकास अवस्थालाई हेर्दा यहाँका मेयर, उपमेयर वा त्यो भन्दा माथिल्लो प्रदेश सरकारका नै कुनै नेता, सांसद वा पालिका प्रमुख नै किन नहुन् उनीहरु संग अहिलेको अवस्थाको परिवर्तन गर्ने र विकासको लामो रेशमा कर्णालीलाई उभ्याउने हैंसियत कसै संग छैन । सुर्खेतका धेरै जानकार र पुराना व्यक्तित्वहरुका अनुसार अहिलेको भन्दा २०४६ सालतिरको सुर्खेत धेरै समुन्नत थियो ।
अव यो परिवेशमा कर्णालीले अर्को चुनाव सम्म पर्खनु नै बिडम्बना हुनेछ । अर्को चुनावमा पनि सम्भावित राजनीतिक नेताहरुको प्रोफाइल पंतिकारले पल्टाएको थियो र जनताले गरेका अनुमान तथा तर्कहरुको अध्ययन गरेको हो । त्यस बिचमा कुनै त्यस्तो सक्षम नेतृत्व कर्णालीले पाउन धेरै समय अभैm कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रको वर्तमान भुँइचालोले कर्णालीमाथि परेको धक्का
केन्द्रमा पनि ओलीको जमिन्दारी र हुकुमी शैलीका कारण नेकपाभित्र ब्यापक असन्तुष्टि छ भने धेरैले अव पार्टी फुटको संघारमा पुगिसकेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा ओकलिरहेका छन् । दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीविच बालुवाटारमा छलफल भई परिणाम घम्साघम्सीतिरै मोडिएपछि ओलीले फरक पार्टी बनाएर जान धम्की दिइसकेका छन् ।
अर्कोतिर गत कात्तिक ५ (२१ अक्टोबर) बुधबार का दिन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतिय गुप्तचर संस्था रअ (रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विङ्स) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसंग भेटघाट गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध हुन थाल्यो र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै ब्रिफिङ्ग गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।
कर्णाली सरकार केन्द्रकै जाँतोमा पिसिएको छ भने नेकपाका प्रदेश सांसदहरु बाध्यता र गुट उपगुटको फेरो समाउदै कुर्सी दौडमा उत्रिएका छन् । सरकार यहाँको छ तर लगाम केन्द्रकै छ, कारण यहाँका संग हैंसियत र ल्याकत दुवै छैन ।
कुटनीतिक प्रोटोकल समेतको ख्याल नराखि गरिएको उक्त भेटले नेपालको कार्यकारी शक्ति केन्द्र मैं गरिएको हस्तक्षेपका रुपमा हेरिएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने भारतिय सेनको जहाज चढेर आएका रअ प्रमुख गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले भेट्दा न त नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिती रह्यो न नेपालका लागि भारतिय राजदुत विनय मोहन क्वात्रा उपस्थित भए ।
उनी उक्त भेटमा बस्न चाहेनन् र दिल्ली पुगिसकेका थिए । यो रहस्यका पछाडी के षड्यन्त्र थियो भन्ने बिषय रहस्यकै गर्वमा छ । यी यावत कुरालाई हेर्दा अहिले ओली राजनीतिक संकटले जेलिएका मात्रै छैनन् हुकुमी शैलीमा उत्रिएर कतै स्पष्टिकरण दिने र कतै पार्टी अन्तरसंघर्षको ह्याङ्ग ओभरमा कर्णालीलाई पिसिरहेका छन् । कर्णाली सरकार केन्द्रकै जाँतोमा पिसिएको छ भने नेकपाका प्रदेश सांसदहरु बाध्यता र गुट उपगुटको फेरो समाउदै कुर्सी दौडमा उत्रिएका छन् । सरकार यहाँको छ तर लगाम केन्द्रकै छ, कारण यहाँका संग हैंसियत र ल्याकत दुवै छैन ।